Shiinaha Bamboo Khaanad Qabanqaabiyaha Qabanqaabiyaha iyo Tusaha Soo-saareyaasha
Shiinaha Bamboo Khaanadda Abaabulaha, Tilmaamaha Soo-saareyaasha Bamboo-qaadaha Shiinaha iyo Buugga Soo-saareyaasha - Waxaa laga soo xigtay Xullo Ballaaran oo ah Abaabulaha Qaban-qaabiyaha Alaabada ee qabanqaabiyaha khaanadda, kala-qaybiyeyaasha bamboo, isku-dubarida khaanadda ka socota Fujian Bridge Style Furnishings Co., Ltd Larboo Bamboo Ex ...
Waa maxay sababta Badeecada Bamboo u sameysaa qaab nololeed waari kara?
Balaastigga la tuuro ayaa ka mid ah kuwa dunida ugu liita ee wax ku biiriya qashinka. Qaddar naxdin leh oo balaastig ah ayaa la isticmaalaa hal mar oo keliya wuxuuna ku dhammaadaa badahayaga, wabiyada, dhirta dhirta iyo qashinka. At Style Bridge, waxaan daryeeleynaa meeraha waana ognahay inaad adiguna sidaas oo kale adigu u ilaaliso. Taasi waa sababta aan ugu heellan nahay inaan ku siino madadaalo, ...
QC & Xakamaynta Tayada
Waxaan alaabta oo dhan ku dari doonnaa bakhaarkeenna, ka dibna waxaan ku sameyn doonnaa kormeer tayo leh bakhaarkeenna, waxaanan ku siin doonnaa warbixin kormeer xirfadeed leh. Haddii aad iibsato muunadda, waxaan kaliya bilaabi doonnaa wax soo saar ballaaran kadib xaqiijintaada. Faahfaahinta waxay lamid tahay yo muunada yo ...
Shiinaha Bamboo kushiinka jumlada
Shiinaha Bamboo Jikada Jumlada - Xullo 2021 alaab tayo sare leh oo bamboo Bamboo ah qiimaha ugu wanaagsan ee laga helo soosaarayaasha Hirgelinta Jikada ee Shiinaha. Bridge Style waxay bixisaa shey naqshad gaar ah: Abaabulaha Bamboo Qabanqaabiyaha Bamboo goynta goynta Bamboo server charcuterie farmaajo & nb ...
Seddex jeer lacag celin muunad ah & $ 100 qiimo dhimis
Qaabka Buundada Abuur Dhiirrigelin Cusub: 1.Ku soo celi lacag celin 3 jeer ah tusaale tijaabo ah (marka laga reebo ujrada dhoofinta). 2.Waxaa lagaa dhimaa $ 100 shey kasta. Waad dooran kartaa mid ka mid ah waxqabadyada kor ku xusan sabuuradda goynta bamboo / habeynta bamboo gacmeedka / boodhka cowska dhoobada bamboo / qalabka jikada / bamboo / keydinta guriga bamboo
Dib u cusbooneysiinta shaqada
Gacaliye Dhammaan, Mahadsanidiin xusuusinta waxaan dib u bilawnay shaqada laga bilaabo 18-kii, Feb, 2021. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, annaga ayaa gacantaada buuxda ku jiri doonna. Mahadsanid iyo salaan wacan. Qaabka Buundada